Ny Sofin’ny Valala | Nisy Namorona Ve?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Pangasinan Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
Ny Sofin’ny Valala
MANANA sofina miavaka ny karazana valala iray any Amerika Atsimo. Tsy ampy iray milimetatra akory ny haben’ny sofiny, nefa hoatran’ny an’ny olombelona ihany ny fiasany. Na feo lavitra be aza henony sady hainy ny manavaka azy. Ohatra hoe ny feon’ny valala hafa sy ny feo alefan’ny ramanavy rehefa mihaza. Isika olombelona anefa tsy maheno an’izany.
Diniho izao: Eo amin’ny tongony roa eo aloha no misy ny sofin’ilay valala. Ahoana no fiasany? Toy ny an’ny olona ihany. Henoiny tsara ireo onjam-peo mba hamantarany hoe feon’inona izany. Hitan’ny mpikaroka koa fa misy taova hafakely ao amin’ny sofin’ny valala. Hoatran’ny balaonina lavalava kely feno rano ilay izy. Misy mitovitovy aminy ihany ao amin’ny sofin’ny olona sy ny biby sasany, fa ny azy fotsiny no bitika dia bitika. Izy io no tena mahatonga azy hahay hanavaka feo sy haheno tsara.
Nilaza i Daniel Robert, mpampianatra ao amin’ny oniversite iray any Royaume-Uni, fa hanampy ny injeniera ny zavatra fantatra momba ny sofin’ny valala. Mety ho hain’izy ireo ny “hanamboatra fitaovana kely kokoa sy mandaitra kokoa hapetaka amin’ny sofin’ny marenina.” Mety hahavita fitaovam-pitsaboana avo lenta koa izy ireo, rehefa mampiasa onjam-peo hitarafana ny ao anatin’ny vatana.
Ahoana ny hevitrao? Vokatry ny evolisiona ve ny sofin’ny valala, sa nisy namorona?